သေနေ့မစေ့သေးသောနေ့ (သို့မဟုတ် ) သေကံမပါသေးသော …ည - Barnyar Barnyar
အိမ်ကို ညနေခြောက်နာရီခွဲလောက်မှ ပြန်ရောက်တော့ အမျိုးသားက ညစာစားဖို့ ဟင်းနွှေး ဘာညာ သူပြင်လိုက်မယ် ဆိုပီး အောက်ထပ်မှာ ပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်…. ကျမတို့ အိမ်က အပေါ်ထပ်နဲ့ အောက်ထပ် အတော်လေးအော်ပြောမှ ကြားနိုင်တာပါ…. သမီးလေးနဲ့ ကျမ အိမ်အပေါ်တက်လာခဲ့ပီး…. ကျမလုပ်စရာလေးရှိလို့ သမီးလေးကို တီဗီ ဖွင့်ပေးပီး…. လုပ်စရာရှိတာလေး လုပ်နေခဲ့ပါတယ်…
သမီးလေးကတော့ အိပ်ရာပေါ်မှာ ဆော့ရင်းကစားရင်း သူစိတ်ဝင်စားတဲ့သီချင်းလေးတွေလာရင် တီဗီငေးရင်းပေါ့…. သမီးလေးက အိပ်ရင် ဟိုကျော်ဒီခွ အိပ်တတ်လို့ ကုတင်ကိုဖြုတ်ပီး သံမံတလင်းမှာ ဖယောင်းပုဆိုးခင်းပီး မွေ့ယာခင်းပီး ကျမတို့ အိပ်ကြပါတယ်…..
အိပ်ယာတစ်နေရာထဲ အခင်းရှိပါတယ်…ကျန်တဲ့အပေါ်ထပ် တစ်ထပ်လုံး ဖယောင်းပုဆိုးခင်းထားတာပါ…. ကျမတို့အိပ်ယာရဲ့ ခေါင်းရင်းမှာ မီးပလပ်ပေါက်ရှိပါတယ်… အဲ့မီးပလပ်ပေါက်ကနေ ဘုတ်ခုံ (extension)ကြိူးခွေ ချပီး အမျိုးသားရဲ့ ဖုန်းကိုအားသွင်းထားပါတယ်…
ကျမ လုပ်စရာရှိတာလေးတွေ လက်စသတ်ပီး သမီးလေးနားထိုင်ရင်း ဘုတ်ခုံမှာ ကျမဖုန်းကို ထပ်အားသွင်းလိုက်ပါတယ်…. သမီးလေးက လှည့်ကြည့်ပီးမြင်သွားတော့…. ဂိမ်း… ဂိမ်းဆိုပီး သူ့အဖေ ဖုန်းကို လှမ်းဆွဲပါတယ်….
အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဖျစ်… ဖျစ်.. ဖျစ် ဆိုပီး ညှော်နံတွေ မီးခိုးတွေ အများကြီးထွက်လာပါတယ်…. ကျမလဲ ဖုန်းနှစ်လုံးကို ဆွဲဖြုတ်ပီး…. သမီးနဲ့ဝေးရာကို ပစ်ထုတ်လိုက်ပီး သမီးကို ခြင်ထောင်အပြင်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်…
ပြန်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ရွက်ဖျင်တဲခြင်ထောင်တစ်ခုလုံး မီးခိုးတွေနဲ့ ပြည့်နေပါတယ် အထဲကို မမြင်ရတော့ပါဘူး…ယောက်ကျားရေ ယောက်ကျားရေ….. အသကုန်အော်ပီး ….. သမီးရေ…နောက်ဆုတ် နောက်ဆုတ် ဆိုပီးအော်တော့…. သမီးလေးက ခြင်ထောင်ခြေရင်းနား ခပ်ခွာခွာလေးရပ်ပီး ကျမကို ကြည့်နေပါတယ်…. မီးပလပ်ပေါက်ကနေ ဘုတ်ခုံကြိုးကို အလောတကြီးဆွဲဖြုတ်လိုက်တော့ ဖုန်းးဆိုပီး ကျမ ဖင်ထိုင်ရက်ကျသွားပါတယ်….. မီးပလပ်ကြိုးလဲ ကျမလက်ထဲ ပါလာပါတယ်…
ကျမဖင်ထိုင်လဲအကျ အမျိုးသားက လှေကားကနေပြေးတက်လာသံကြားတော့ သမီးလေးက သူ့အဖေဆီ ပြေးသွားပါတယ်…. ကျမ အဲ့အချိန်ထိ အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတုန်းပါ… .ညှော်နံတွေမွှန်ထူနေတော့ အမျိုးသားက ဝရန်တာတံခါးတွေ လိုက်ဖွင့်ပီး ကျမကို ဆွဲထူပါတယ်…..
ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြပီးနောက်…. မီးခလုတ် အရင်ပိတ်ပီးမှ ကြိုးကိုဆွဲဖြုတ်သင့်ကြောင့် အမျိုးသားက ပြောမှ ကိုယ့်ဉာဏ်နည်းမှုကို ကိုယ်တွေ့မိပါတယ်… သမီးကို ခြင်ထောင်အပြင် ဆွဲထုတ်ချိန်နဲ့ အိပ်ယာခေါင်းရင်းကို သွားချိန် အချိန်စက္ကန့်ပိုင်းလေးမှာ… ကျမ တွေးနေမိတာက…. .အောက်က သံမံတလင်းကြီး…. ရှော့ခ် တွေဖြစ်လို့ လျှပ်စစ်တွေစီးကုန်ရင် ငါ့သမီးလေးကရပ်နေတာ ဆိုတဲ့အတွေးပဲရှိပါတယ်….
မီးခလုပ်ကို ပိတ်ပီးမှ ဆိုတဲ့ ဆင်ခြင်ဉာဏ် မရှိတော့ပါဘူး… မီးပလပ်ပေါက်နဲ့ လောင်နေတဲ့ ဘုတ်ခုံကြိုး မြန်မြန်ဝေးရမယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ပဲ အလောတကြီးဆွဲဖြုတ်လိုက်မိတာ…. တွန်းကန်လိုက်လို့သာ ကျမဖင်ထိုင်ရက်ကျသွားတာ… ဆွဲငင်လိုက်ရင်ကော…. ဆွဲငင်နေတဲ့အချိန် သမီးလေးက သူ့အဖေဆီမပြေးဘဲ ခါတိုင်းလိုကျမခြေထောက်လေး လာကိုင်ထားရင်ကော.😢 ကျမ တော်တော်လေးထိတ်လန့်သွားတယ်…
ခါတိုင်းလို သမီးလေးနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေချိန် ဖုန်အားသွင်းထားခဲ့ပီး အိမ်အောက်ထပ်ဆင်းပီး…. အိပ်အလုပ်တွေ စိတ်ချလက်ချ လုပ်နေချိန်များ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်…….ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့လဲ တုန်လှုပ်နေမိတယ်……
ကိုယ့်အသုံးမကျမှုကြောင့် ဉာဏ်နည်းတာတွေကြောင့်တော့ ငါတို့ မိသားစု မထိခိုက်စေရဘူး… သတိအမြဲထားပီး ဆင်ခြင် စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ *ကလေးနား ဘယ်တော့မှ ဖုန်းအားမသွင်းတော့ဘူး *ကလေးနား ဘယ်တော့မှ မီးပလပ်ခုံတွေ မရှိစေဘူး* အိပ်ယာထဲ ဘယ်တော့မှ ဖုန်းအားသွင်းပီး ဖုန်းမသုံးတော့ဘူး
#ဆောင်လို့ရှောင်လို့ ရအောင် မျှဝေပေးခြင်းသာ……….။
အိမျကို ညနခွေောကျနာရီခှဲလောကျမှ ပွနျရောကျတော့ အမြိုးသားက ညစာစားဖို့ဟငျးနှေး ဘာညာ သူပွငျလိုကျမယျ ဆိုပီး အောကျထပျမှာ ပွငျဆငျနခေဲ့တယျ…. ကမြတို့အိမျက အပျေါထပျနဲ့ အောကျထပျ အတျောလေးအျောပွောမှ ကွားနိုငျတာပါ…. သမီးလေးနဲ့ ကမြ အိမျအပျေါတကျလာခဲ့ပီး…. ကမြလုပျစရာလေးရှိလို့သမီးလေးကို တီဗီ ဖှငျ့ပေးပီး…. လုပျစရာရှိတာလေး လုပျနခေဲ့ပါတယျ…
သမီးလေးကတော့ အိပျရာပျေါမှာ ဆော့ရငျးကစားရငျး သူစိတျဝငျစားတဲ့သီခငျြးလေးတှလောရငျ တီဗီငေးရငျးပေါ့…. သမီးလေးက အိပျရငျ ဟိုကြျောဒီခှ အိပျတတျလို့ကုတငျကိုဖွုတျပီး သံမံတလငျးမှာ ဖယောငျးပုဆိုးခငျးပီး မှယေ့ာခငျးပီး ကမြတို့အိပျကွပါတယျ…..
အိပျယာတဈနရောထဲ အခငျးရှိပါတယျ…ကနျြတဲ့အပျေါထပျ တဈထပျလုံး ဖယောငျးပုဆိုးခငျးထားတာပါ…. ကမြတို့အိပျယာရဲ့ ခေါငျးရငျးမှာ မီးပလပျပေါကျရှိပါတယျ… အဲ့မီးပလပျပေါကျကနေ ဘုတျခုံ (extension)ကွိူးခှေ ခပြီး အမြိုးသားရဲ့ ဖုနျးကိုအားသှငျးထားပါတယျ…
ကမြ လုပျစရာရှိတာလေးတှေ လကျစသတျပီး သမီးလေးနားထိုငျရငျး ဘုတျခုံမှာ ကမြဖုနျးကို ထပျအားသှငျးလိုကျပါတယျ…. သမီးလေးက လှညျ့ကွညျ့ပီးမွငျသှားတော့…. ဂိမျး… ဂိမျးဆိုပီး သူ့အဖေ ဖုနျးကို လှမျးဆှဲပါတယျ….
အဲ့ဒီအခြိနျမှာ ဖဈြ… ဖဈြ.. ဖဈြ ဆိုပီး ညှျောနံတှေ မီးခိုးတှေ အမြားကွီးထှကျလာပါတယျ…. ကမြလဲ ဖုနျးနှဈလုံးကို ဆှဲဖွုတျပီး…. သမီးနဲ့ဝေးရာကို ပဈထုတျလိုကျပီး သမီးကို ခွငျထောငျအပွငျကို ဆှဲထုတျလိုကျပါတယျ…
ပွနျလှမျးကွညျ့လိုကျတော့ ရှကျဖငျြတဲခွငျထောငျတဈခုလုံး မီးခိုးတှနေဲ့ ပွညျ့နပေါတယျ အထဲကို မမွငျရတော့ပါဘူး…ယောကျကြားရေ ယောကျကြားရေ….. အသကုနျအျောပီး ….. သမီးရေ…နောကျဆုတျ နောကျဆုတျ ဆိုပီးအျောတော့…. သမီးလေးက ခွငျထောငျခွရေငျးနား ခပျခှာခှာလေးရပျပီး ကမြကို ကွညျ့နပေါတယျ…. မီးပလပျပေါကျကနေ ဘုတျခုံကွိုးကို အလောတကွီးဆှဲဖွုတျလိုကျတော့ ဖုနျးးဆိုပီး ကမြ ဖငျထိုငျရကျကသြှားပါတယျ….. မီးပလပျကွိုးလဲ ကမြလကျထဲ ပါလာပါတယျ…
ကမြဖငျထိုငျလဲအကြ အမြိုးသားက လှကေားကနပွေေးတကျလာသံကွားတော့ သမီးလေးက သူ့အဖဆေီ ပွေးသှားပါတယျ…. ကမြ အဲ့အခြိနျထိ အူကွောငျကွောငျဖွဈနတေုနျးပါ… .ညှျောနံတှမှေနျထူနတေော့ အမြိုးသားက ဝရနျတာတံခါးတှေ လိုကျဖှငျ့ပီး ကမြကို ဆှဲထူပါတယျ…..
ဖွဈစဉျကိုပွောပွပီးနောကျ…. မီးခလုတျ အရငျပိတျပီးမှ ကွိုးကိုဆှဲဖွုတျသငျ့ကွောငျ့ အမြိုးသားက ပွောမှ ကိုယျ့ဉာဏျနညျးမှုကို ကိုယျတှမေိ့ပါတယျ… သမီးကို ခွငျထောငျအပွငျ ဆှဲထုတျခြိနျနဲ့ အိပျယာခေါငျးရငျးကို သှားခြိနျ အခြိနျစက်ကနျ့ပိုငျးလေးမှာ… ကမြ တှေးနမေိတာက…. .အောကျက သံမံတလငျးကွီး…. ရှော့ချ တှဖွေဈလို့လြှပျစဈတှစေီးကုနျရငျ ငါ့သမီးလေးကရပျနတော ဆိုတဲ့အတှေးပဲရှိပါတယျ….
မီးခလုပျကို ပိတျပီးမှ ဆိုတဲ့ ဆငျခွငျဉာဏျ မရှိတော့ပါဘူး… မီးပလပျပေါကျနဲ့ လောငျနတေဲ့ ဘုတျခုံကွိုး မွနျမွနျဝေးရမယျဆိုတဲ့ အသိနဲ့ပဲ အလောတကွီးဆှဲဖွုတျလိုကျမိတာ…. တှနျးကနျလိုကျလို့သာ ကမြဖငျထိုငျရကျကသြှားတာ… ဆှဲငငျလိုကျရငျကော…. ဆှဲငငျနတေဲ့အခြိနျ သမီးလေးက သူ့အဖဆေီမပွေးဘဲ ခါတိုငျးလိုကမြခွထေောကျလေး လာကိုငျထားရငျကော. ကမြ တျောတျောလေးထိတျလနျ့သှားတယျ…
ခါတိုငျးလို သမီးလေးနှဈနှဈခွိုကျခွိုကျအိပျပြျောနခြေိနျ ဖုနျအားသှငျးထားခဲ့ပီး အိမျအောကျထပျဆငျးပီး…. အိပျအလုပျတှေ စိတျခလြကျခြ လုပျနခြေိနျမြား ဒီလိုဖွဈခဲ့ရငျ…….ဆိုတဲ့ အတှေးတှနေဲ့လဲ တုနျလှုပျနမေိတယျ……
ကိုယျ့အသုံးမကမြှုကွောငျ့ ဉာဏျနညျးတာတှကွေောငျ့တော့ ငါတို့မိသားစု မထိခိုကျစရေဘူး… သတိအမွဲထားပီး ဆငျခွငျ စောငျ့ရှောကျရမယျဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ *ကလေးနား ဘယျတော့မှ ဖုနျးအားမသှငျးတော့ဘူး *ကလေးနား ဘယျတော့မှ မီးပလပျခုံတှေ မရှိစဘေူး* အိပျယာထဲ ဘယျတော့မှ ဖုနျးအားသှငျးပီး ဖုနျးမသုံးတော့ဘူး
#ဆောငျလို့ရှောငျလို့ ရအောငျ မြှဝပေေးခွငျးသာ……….။